Lebanona: fanambadiana sivily tamin’ny andron’ny mpifankatia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2009 4:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, srpski, English
Nisy antso vaovao mba hanomezan'I Liban alalana ny fanambadiana sivily izay tontosaina amin'ny andron'ny mpifankatia tany amin'ny bara iray tany Beyrouth tamin'iny faran'ny herinandro iny.
Mpifankatia maro avy amin'ny finoana maro samihafa no nanao sarintsarim-pampakarambady tao amin'ny Gemmayze trano fisotroana iray be mpahalala ao mba ho fanoherana ny lalàna mifehy ny fanambadiana.
Raha ny zava-misy hatreto , ny mariazy sivilin’ny mpifankatia samy hafa finoana dia tsy nekena raha tsy tany Libanona no nanaovana azy. Any amin’ny tany feno antokom-pinoana maro “sekta”, mitondra amina raharaha somary manahirana ihany ny fisian'ny olon-droa samy hafa antokom-pinoana.
Ity hetsi-panoherana ity dia iray amin'ireo ezaka faobe ho fanoloana ny gejan'ny finoana sy ny antokom-pinoana mianjady amin'ny rafitra politika eto Libanona ho lasa rafitra laika, mitovy ho an'ny rehetra
Ny lanonan’ny andron’ny mpifankatia dia notanterahana andro vitsivitsy taorian’ny fanambaran’ny Minisitry ny atitany Ziad Baroud fa azon'ny olom-pirenena ankehitrinyatao ny manala ny famantarana ny finoany ao anatin’ny kara-panondrom-pirenena raha tiany izany.
Iny hetsika iny dia notehafan’ny mpitoraka blaogy Libaney maro, na dia nisy hafa niahiahy ihany aza.
Ms. Tee avy amin’ny B-side Beirut dia isan'ireo nankasitraka ny fanapahan-kevitr'ingahy Baroud:
Tototry ny asa fampianarana teo, ka tsy naharaka loatra izay fandehan'ireo vaovao farany. Noho izany, raha nahare aho fa manana fahafahana hamafa ny finoako ao amin’ny faritra natokana hanaovana izany (Nufus) Nokosehiko ny masoko ary notsongoiko ny tenako [toy ny manonofy]. Ahoana no nahatonga izao?
Ankoatry ny hoe nampitombo ny fanajako ny Minisitry ny atitany Ziad Baroud izany, mbola miampy, ity irery angamba no hany avy any Libanona tato anatin'ny taona vitsivitsy sy hitako fa manana ny lanjany mendrika hanaovana lanonana. Amin'ny maha vokatra tsy mpino ahy nateraky ny fanambadiana samihafa finoana, raisiko ho ahy manokana izay [mahatsapa fa voakasik’izany manokana aho].
Bolongam-panantenana iray araka ny The Lebanese Inner Circle:
Na dia hoe tsy nanala afa-tsy ny firehana ara-pivavahana azy izy ity aty am-piandihana, ny tanjona dia ny hanafoana tanteraka ny lalàna mifehy ny fivavahana, ary ho tonga amin’ny lalàna sivily hampiharina amin'ny isam-batan'olona, mamela ny resa-pivavahana ho raharahan'ny tsy miankina.
Any amin’ny tany izay tena latsa-paka ny fivavahana amin'ny sekta, mety hahaliana ny mahita hoe Libaney firy no hanararaotra izany fahafahana izany amin’izao.
Mipao-tsatroka ambany hoy I Hanibaal ao anatin’ny Lebanon Iznogood. Na dia izany aza anefa, izy dia manambara fa mbola lavitra ny dia, ary nanome fandalinana goavana momba ny fifandroritana misy eo amin’ny fivavahana sy ny maha-laika izy ao amin’ny firenena izy :
Na dia dingana lehibe ho amin'ny fametrahana rafitra politika laika Libaney aza iny, dia mbola misy vato misakana lehibe ny fanafoanana tanteraka ny resa-pinoana eo amin'ny fiainan'olon-tsotra. Ny rafitra politika Libaney dia tena mbola isan'ireny ntaolo be ireny maneran-tany satria ny maha olom-pirenena antsika, ny fiainana ara-politikantsika dia tsy mba tantanan’ny rafitra tsy miankina fa mijanona kosa voageja sy tery eny an-tanan’ny fiangonana, moske sy fivavahana hafa ivondronan'ireo izay mitondra ny Tany. Ilay ambara fa demokrasia Libaney dia fitaka fampandriana adrisa; ny marina, i Libanona dia “théocratie féderée” izay ny vondrom-pinoana – fa tsy ny vahoaka- no tena hita ao anaty governementa sy ireo rafi-panjakana.
Hanibaal koa dia mampitandrina fa ny fanambaran’I M.Baroud dia mety ho “fampandriana adrisa” mba hampitoniana ireo mpanohana ny resaka Laika eto Libanona:
Ny ohatra hafa dia any Libanona ianao tsy afaka ny ho Hindoista, agnostika, Bahai na koa tsy mpino, na ho mpikambana ao amina fivavahana hafa ankoatr'ireo 18 eken'ny Lalampanorenana Libaney. Tsy sivily ianao raha tsy ao anatin’ireo 18 ireo. Izany hoe, ilay lalàna nataon'ny Ministra Baroud izany dia mety ho fampandriana adrisa fotsiny satria nanala fotsiny ihany ny fampahalalana ny finoana, fa ny finoana kosa hanohy hanavaka hoe iza no afaka mifidy ary iza no afaka mifaninana hanao asam-bahoaka.
Anatin'ny resaka ady momba ny mariazy sivily kosa, Hanibaal dia manazava ny marina momba ny fifandraisan'ny samihafa finoana any Libanona ary ny toerana sarotra misy ny vehivavy ao antin'izany fijery izany:
Any Liban, ny mpivady avy amin’ny mariazin'ny samihafa finoana dia samy tsy mahazo mitazona ny fivavahany avy; Matetika, ny vehivavy no voatery mandao ny fivavahany ka mivadika manaraka ny vadiny mba hahafahany manambady azy. Ny “heloka bevava ho fiarovam-boninahitra” dia arovan'ny lalàna any Libanona: Saiky isaky ny roa andro dia vehivavy silamo iray no maty satria nisy anadahiny, ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny raiamandreniny, na lehilahy hafa tao anatin’ny fianakaviany no niampanga na niahiahy azy ho manana fifandraisana ivelan’ny fanambadiana. Matetika, dia io no fomba entin'ireo lehilahy,havana akaiky ihany, hamonoana sy hampanginana ireo vehivavy, nefa izy ireny ihany no nanery ny vehivavy iray tao anatin'ny fianakaviany hivaro-tena ka matahotra sao ho vakian-dramatoa barara imasom-bahoaka ny zavatra natao, ary dia ambarany avy eo fa hoe nanala baraka ny fianakaviana.
Ms. Tee avy ao B-side Beirut koa dia mahatsapa izany fitaintainana izany, nefa izy dia mino fa ny fanapahan-kevitr’ I Baroud dia nametraka ny firenena amin’ny làlana marina. Nandeha fisainana ihany koa n y anao vavy momba ny fifanoheran-kevitra fonosin'ny “fijoroana maha-mpikambana anaty sekta”:
Fahagagana no andrasana vao ho foana ny fandalàna ny sekta. Mazava be toa masoandro be lohataona, fa ny parlementa, ny rafi-pifidianana, ary ny demokrasian'ny maro an'isantsika dia hitohy amin'izao làlany izao ihany na dia hanala hatramin’ny farany ny momba ny finoany ao amin’ny fitanana an-tsoratra momba azy aza ireo olom-pirenena rehetra. Indrindra indrindra fa ny fototra ijoroan'izy ireo dia ny fanisana izay vondrom-bahoaka tsy misy akory hatrizay.
Nefa izay indrindra no antony nahatonga ity fanesorana ny finoana niavina ity tao anaty fitanana an-tsoratra hipoapoaka sy ho goavana: mitambesatra amiko ny vesatry ny fandraisana andraikitra, amin’ny maha-olon-tsotra sy amin'ny maha-olom-pirenena ahy, ka hanainga rahampitso maraina aho hamafa ny anaram-pinoako ao anaty boky firaketana Nufus. Ary eo no hanomboka ny fanamby. Izay mbola hitranga ao aoriana ao no tena azo hanaingana adihevitra rehefa tena hita tanteraka ny vokatr'ilay fanafoanan'ny olona ny finoana misy ny tsirairay. Noho izany, manontany tena aho, firy ny hanao io zavatra io? Ary firy no mba hanontany tena hoe: iza aho, ankoatry ny fivavahako?